Alefa… ry Malagasy ! | NewsMada
Alefa… ry Malagasy !
Par Taratra sur 02/07/2019
Tavela any ambadibadika any aloha ny fahantrana, ny adilahy politika, sns, fa ny fiadiana ny amboaran’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra (Can 2019) no maresaka eto amin’ny tanàna. Tsy mbola nisy mihitsy ny Can nalaza toy ity, teto amintsika, satria sambany ny Malagasy no nandray anjara tamin’izany. Vao mainka koa nampivaivay ny fanarahana akaiky ity fifaninanana goavana ity ny fandresena nisesisesy azon’ny ekipam-pirenena.
Tsy ankiato ny “Alefa Barea” any anaty “facebook” any, hatramin’ny niandohan’ny fiadiana ny amboara. Ankehitriny aza, araka ny fantatra, lasa nalaza any ampitan-dranomasina any mihitsy io “alefa” io. Misy ny mihevitra fa “teny manan-kery” izany ka mampahomby ny ady. Na inona na inona tokoa moa fahaizan’ireo mpilalao malagasy, raha tsy misy ny fankaherezana toy izany, toa mandringa ihany.
Azo tsapain-tanana ary heverina fa iaraha-manaiky ny fientanam-po, indrindra ny alahady alina teo, rehefa nandresy ny ekipam-pirenena nizerianina, ny Barea. Samy mahatsapa fa mpiray ra, mpiray tanindrazana, mpiray firenena no nandresy ka rehareha. Iray fo tanteraka ny Malagasy, hita ny firaisankina, ary angamba, na ireo nisy romoromo sy lonilony teo aloha aza, lasa nihavana noho ny fandresen’ny ekipa iraisana sy nampiray. Heverina fa tsy hijanona hatreo ny fivitranan’ny fihavanana… Sanatria!
Nandresy foana, hatreto (inoana fa hitohy izany) ny ekipantsika. Voninahitra iaraha-miloloha izany. Antenaina fa tsy ny eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ihany no hanehoan’ny Malagasy rehetra izany fa amin’ny sehatra rehetra hisongadinan’ny mpiray tanindrazana. Tsy ho mpisintona ny tafiakatra na ho mpamingana ny nahavita dingana fa ho mpanohana hatrany isika. Tsy hijanona amin’ny “Alefa Barea” fa hitohy amin’ny “Alefa fa samy Malagasy”!
Nambaran’ny mpampahalala vaovao, any ivelany any, fa tsy nampoizina ny zava-bitan’ny ekipa malagasy, tamin’ity Can ity. Irariana ny hahazoany ny amboaran’i Afrika. Raha sanatria tsy izany koa anefa, antenaina fa tsy ho “sakaizan’ny mpandresy” isika ka hanakiana sy hanome tsiny. Sa tsy izany? “Alefa … ry Malagasy!”.